Soo dejisan LibreOffice 5.2.2 iyo 5.2.3 beta 1 – Vessoft
Soo dejisan LibreOffice
LibreOffice – software caan ah ay la socdaan lifarbuul xafiiska kala duwan. Software waxaa ka mid ah: Tafatirayaasha qoraalka iyo tabular, sayidkayga ah bandhigyo, Tifaftiraha Graphics dulinka, Tifaftiraha ekeysiin iyo module ee maamulka database. LibreOffice taageertaa qaabab ee Xafiiska Microsoft oo lifarbuul kale xafiiska si bixinta ee shaqada raaxo leh. Software waxa kale oo uu awood u siisaa inuu ballaariyo fursadaha gaarka ah ay isku xidha daro kala duwan. LibreOffice uu leeyahay dareen leh oo si sahlan loo isticmaali interface.
Samee ee lifarbuul xafiiska kala duwan
Taageerida qaabab ee Xafiiska Microsoft
Lagu daro Support
LibreOffice Software la xiriira:
English, Українська, Français, Español... Microsoft Office Excel Viewer 12.0.4518.1071 iyo 12.0.6320.5000
PotPlayer 1.6.55390 iyo 1.6.55584 beta
English, Українська, Español, 中文... SMPlayer 16.9
العربية, English, Українська, Français... MiniTool Power Data Recovery 7